Puntland: Waxba kama jiraan tirakoobka ay dowladda federaalku shaacisay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Maamulka Puntland ayaa ku gacan seyray sahan qiyaaseedka ay shalay soo bandhigtay dowladda federaalka ee Soomaaliya, kaasoo tirada dadka Soomaaliyeed ku qiyaasay 12-milyan.
Wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland, Cali Axmed Faatax ayaa ku tilmaamay natiijada ka soo baxday tiro-koobka mid aanan waxbo ka jirin, oo aan sax aheyn marka la eego muddada ay qaadatay sameynta sahankaas.
Wuxuu sheegay in tirada dadka gobollada Puntland ku nool ee lagu xusay sahanka, ay ka badan tahay tiro-koobka ay iyagu hayaan oo ka badan 4-milyan.
Wasiirku wuxuu been abuur ku sheegay tirada dadka Puntland ee ku cadayd shaxda wasaarada Federaalku soo bandhigay wuxuu sheegay in tirada qiyaasta dadka Puntland tahay 4,284,633 qof.
Faatax ayaa sheegay in qorshuhu ahaa in shir ku saabsan tiro-koobka lagu qabto Uganda, ka hor inta aan la soo bandhigin.
Wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shalay soo bandhigtay maanta sahan qiyaaseed muujinayo inta ay la’eg tahay tiro-koobka dadka Soomaaliyeed.
Munaasabad ka dhacday Muqdisho, ayey wasaaraddu ku shaacisay natiijada ka soo baxday xog-ururin ay si wadajir ah isaga kaashadeen fulinteeda wasaaradda, maamullada iyo hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan dadweynaha ee UNFPA.
Xog-ururinta oo lagu saleeyey 18-kii gobol ee ay Soomaaliya ka koobneyd ka hor dhicitaankii dowladdii dhexe, lana fuliyey intii u dhexeysay 2013-2014 ayaa muujisay in tirada Soomaalidu tahay 12-milyan.
Wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Cali Ceynte ayaa sheegay in sahankan ay ku ogaadeen, in 74% shacabka Soomaaliyeed ay da’doodu ka hooseyso 30 sano, halka 10% ay yihiin dad gudaha dalka ku barakacay.